Utshintsha njani igumbi lokuhlambela ngezinye izimvo ezilula | IBezzia
Susana Garcia | 03/05/2021 20:00 | Ukuhonjiswa, Iindlela zokuhombisa
Igumbi lokuhlambela yenye yeendawo ekhaya lethu idinga imisebenzi emininzi kunye notshintsho ukuba sifuna ukuyivuselela. Kodwa kunokwenzeka ukuba utshintshe inkangeleko yayo ngokuthinta nje ezimbalwa ngaphandle kokuya kwimisebenzi emikhulu okanye kwiinkqubo ezinzima. Kungenxa yoko le nto sinokuthi siqaphele amaqhinga ambalwa kunye nemibono yokutshintsha igumbi lokuhlambela ngendlela elula esenza sizive sinendawo entsha ngokupheleleyo.
Ukuhlaziya izithuba akuyona into elula, kodwa sinokuyenza ngezinye izimvo. Kukho abantu abakwaziyo ukutshintsha iindawo zabo emakhaya ngaphandle kokwenza imisebenzi emikhulu, ukuze basebenzise oko banako kwaye bonge imali kutshintsho. Siza kubona ezinye izimvo eziya kusinceda ukuba sitshintshe igumbi lokuhlambela ngendlela elula.
1 Sebenzisa ipeyinti yethayile
2 Yiba nephepha lodonga
3 Guqula isinki kunye nesipili
4 Yongeza umhlaba omtsha
5 Yongeza izityalo
6 Dibanisa amalaphu kunye neenkcukacha
Sebenzisa ipeyinti yethayile
Enye yezinto ezihlala zicetyiswa xa kulungiswa iindawo ngaphandle kokutyala imali kakhulu kukuthenga ipeyinti elungileyo ukunika yonke into isandla. Ayizukujongeka nje ukuba iindonga ziya kubonakala zintsha, kodwa sinokutshintsha umbala wegumbi lokuhlambela kwaye wenze yonke into ithathe ubomi obutsha. Kule meko kufuneka sisebenzise ipeyinti yethayile ukuba yile nto sinayo kwigumbi lokuhlambela. Kukho iipeyinti ezininzi, ezine-matte, satin okanye i-gloss finish, ukunika igumbi lakho lokuhlambela inkangeleko entsha. Eli lelinye lamanyathelo okuqala ekufuneka uwaqwalasele. Ungayitshintsha ibhafu, indawo yokuhlamba okanye zonke iindonga.
Yiba nephepha lodonga
Iphepha lodonga yinto esihlala siyisebenzisa kumagumbi okulala nakwiindawo zokuhamba okanye kumagumbi okuhlala. Kodwa akuqhelekanga kakhulu ukuyibona kwindawo yokuhlambela. Nangona kunjalo, namhlanje yi umgangatho ophezulu ongasetyenziselwa kwezinye iindawo zokuhlambela. Ukuba unendawo yodonga ngaphandle kweethayile, ungathatha ithuba kwaye ube nesibindi ngephepha lodonga olukhulu ukunika ukubukeka kweediliya kunye nemibala kwindawo yakho yokuhlambela. Ukuba igumbi lokuhlambela lisisitayile seediliya, umbono ulungile kwaye unokwenza igumbi lokuhlambela libe yindawo enesitayile esininzi.
Guqula isinki kunye nesipili
Unako tyala imali kwiyunithi entsha yamampunge nakwisipili. Yindawo ebaluleke kakhulu kwigumbi lokuhlambela elinobukho obuninzi kunye nokuqaqamba. Ukuba asinakho ukutshintsha ezinye izinto, ukufaka isinki entsha yokugcina kunye nesipili osithandayo kunokuba yenye yeendlela zokwenza igumbi lokuhlambela libukeke litsha kwakhona. Ezona zibuko zilula, ezingqukuva okanye zeediliya zithandwa kakhulu. Ezantsi ungabeka indawo yokugcina izinto ngombala okhanyayo. Kwimeko nayiphi na into, isitayela sefenitshala iya kuxhomekeka kwisitayela sokuhlambela.
Yongeza umhlaba omtsha
Olu sele lulutshintsho olungenakwenziwa ngumntu wonke, kodwa inyani kukuba kunokwenzeka ukutshintsha umgangatho ngomsebenzi omncinci namhlanje. Ungakhetha umgangatho oko kukuthi fakela ngenkqubo yokucofa imigangatho yevinyl ezilinganisa iinkuni. Kukho imibala enemibala emihle kwaye yenza indawo ibonakale ngathi yeyangoku kwaye yeyangoku ngokuwongeza nje kumgangatho esinawo ukuba sele uphumile kwisitayile.
Las izityalo zinika umbala kwaye zinika ubomi kuyo yonke into. Kungenxa yoko le nto inokuba ngumbono omuhle ukuhombisa indawo. Ukongeza izityalo kunye neentyatyambo zongeza i-bohemian kunye ne-touch ekhethekileyo kuyo nayiphi na indawo. Kwimeko yegumbi lokuhlambela, kufuneka songeze izityalo ezijamelana nokufuma okuhlala kubakho, kuba kungenjalo abayi kuphila. Kodwa kukho ezinye izityalo ezifanelekileyo kwezi ndawo.
Dibanisa amalaphu kunye neenkcukacha
Enye into onokuyenza utshintsho ngokulula ziindwangu kunye neenkcukacha ezincinci, eya kwenza umahluko omkhulu. Jonga iitawuli ezifanayo kunye neenkcukacha kwaye uya kubona ukuba ezi zinto zidibeneyo zinika ukuhambelana okuthile kwisithuba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ukuhonjiswa » Ungayitshintsha njani indawo yakho yangasese ngendlela elula